नेपालीबाट अंग्रेजीमा पुस्तक अनुवाद सेवाहरू
ProofreadingServices.com ले फिक्शन र गैरफिक्शन पुस्तकहरू नेपालीबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दछ, जसले लेखकहरूलाई नयाँ पाठकहरू माझ पुग्न र थप पुस्तकहरू बेच्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो व्यावसायिक अनुवाद सेवाहरू १००% मानव आधारित छन् — कहिले स्वचालित हुँदैनन् - र हाम्रो आफ्नो लेखकीय आवाज र शैली जोगाउँदै सही अनुवाद प्रदान गर्नमा हामी गर्व गर्दछौं।
साहित्यिक अनुवाद मुल्य उद्धरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईको पुस्तक नेपालीबाट अंग्रेजीमा किन अनुवाद गर्नुहुन्छ?
तपाईले आफ्नो पुस्तक लेख्न महिनौं वा वर्ष बिताउनु भयो, त्यसोभए नेपालीमा मात्र प्रकाशित गरेर यसको प्रभाव किन सीमित गर्नु? नेपाली नपढ्ने अरबौं मानिसहरुमा पुग्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईको काम अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नु हो। व्यावसायिक अंग्रेजी अनुवादको साथ, तपाईले आफ्नो पाठक बढाउने मात्र नभएर तपाईको बिक्री पनि बढाउनु हुनेछ।
हामी कस्ता पुस्तक अनुवाद सेवाहरू प्रदान गर्दछौं?
हाम्रो अंग्रेजी टीम द्वारा अलग प्रुफ रिडिङ्गको साथमा हामी नेपालीबाट युएस र युके इङ्ग्लिशमा अनुवाद प्रदान गर्दछौं। जबकि अन्य सेवाहरूले केवल तपाईंको पुस्तक अनुवाद गर्दछन्, हामी दुबै पाठ अनुवाद गर्दछौं र यसलाई अंग्रेजीको विज्ञलाई पठाउछौं जसले अनुपयुक्त वाक्यांश हटाउँछ र सुस्त त्रुटिहरू समात्छ। जे भए पनि, ProofreadingServices.com एक प्रूफरीडिंग र सम्पादन सेवा को रूपमा शुरू भएको छ, र हाम्रो टोलीले विश्वको सबै भन्दा उत्तम अंग्रेजी सम्पादकहरू समावेश गर्दछ।
हामी कस्तो प्रकारको पाण्डुलिपिहरू अनुवाद गर्छौं?
हामी उपन्यास, गैह्र फिक्शनको कामहरू, बच्चाहरूको किताबहरू, र विश्वभरिका धेरै लेखकहरूको लागि अनुवाद गर्दछौं। हाम्रो निम्न विधाहरुमा विशेषज्ञता छ ...
साहित्यिक पुस्तकहरु, जस्तै विज्ञान काल्पनिक उपन्यास, रहस्य, रोमान्स उपन्यास, र ऐतिहासिक फिक्शन
शैक्षिक पुस्तकहरु, जस्तै दर्शन, इतिहास, विज्ञान, र अन्य विषयहरूको पाण्डुलिपिहरू
बिजनेस पुस्तकहरु, जस्तै उत्पादकताको बारेमा ईबुकहरु, विचार नेतृत्व पुस्तकहरु, र अधिक
हामीले हजारौं ग्राहकहरूको साथ काम गरेका छौं जसका किताबहरूमा धेरै विधा र विषयहरू छन् - युवा वयस्क फिक्शनदेखि संस्मरणहरू, कुकबुकहरू, देखि लिएर राजनीति विज्ञान, प्रविधि, र कलाको बारेमा गैरफिक्शन पुस्तकहरू। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, भाषा विशेषज्ञहरूको फराकिलो संजालसँगको हाम्रो वर्षौंको अनुभवको अर्थ हामी कुनै पनि शीर्षकमा लगभग कुनै पनि भाषामा लेखिएका पुस्तकहरू अनुवाद गर्न र प्रूफरीड गर्न सक्दछौं।
तपाईंको पुस्तकको लागी हाम्रो नेपाली अनुवाद सेवाहरूनै किन छनौट गर्ने?
ProofreadingServices.com मा, हामी पुस्तकहरू साहित्यिक अनुवादकहरूलाई दिन्छौं, साधारण अनुवादकलाई होईन। तपाईंको विधाको परिपाटीहरू अवलोकन गर्न र तपाईंको आवाज र लेखन शैली को सूक्ष्मता संरक्षण गर्न एक कुशल साहित्यिक अनुवादक अक्षरश शब्द-को-शब्द अनुवाद भन्दा पर जान्छ।
संसारभरका लेखकहरूको लागि शीर्ष अनुवादकहरू र अंग्रेजी प्रूफरीडरहरूसँग जडान गर्न सजिलो बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। चाहे तपाईं काठमाडौं, पोखरा, ग्यान्टोक वा अन्य कतै बस्नुहुन्छ, हाम्रो नेपाली-देखि-अंग्रेजी अनुवाद छुट्टै प्रूफरीडिंगको साथ अधिक पाठकहरूलाई तपाईंको पुस्तक किन्न र तपाईंको कामको आनन्द लिनको लागि सरल तरीका हो। हामी उच्च-गुणस्तरीय अनुवाद सेवाहरू, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, र किफायती दरहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं, र हाम्रो कामको साथ हामी तपाईंको सन्तुष्टिको ग्यारेन्टी गर्दछौं।
अनुवाद मुल्य उद्धरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।